Madaxweynaha Puntland & Wefdi uu hogaaminayo oo Goor dhaweyd gaaray …. – SBC
Madaxweynaha Puntland & Wefdi uu hogaaminayo oo Goor dhaweyd gaaray ….
Qardho-Wefdi Balaaran oo uu hogaaminayo Madaxweynaha Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa gaaray Magaalada Qardho ee Gobolka Karkaar waxaana Wefdiga Halkaasi ku soo dhaweeyay Wasiiro ka Tirsan maamulka Puntland & Masuuliyinta Gobolka & Kan Degmada.
Duqa Degmada Qardho Maxamed Siciid Hogaamo la roor ayaa waxaa uu la hadlay warbaahinta isaga oo sheegay inay Wefdiga Madaxweynaha Si weyn ugu soo dhaweeyeen Magaalada Qardho Waxaana uu xusay in Madaxweynaha & Wefdigiisa La dejiyay Hotelka Alla Aamin ee Magaalada Qardho isaga oo sidoo kale xusay in Kulamo ay qaadan Doonan Qadada ka dib.
Weli faahfaahin Lagama bixin Safarka Madaxweynaha ee Magaalada Qardho waxaana Warar horudhac ah oo ay heshay warbaahinta SBC ay ku waramayaa inuu Sidoo kale Iman Doono Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari hase ahaatee weli war sugan lagama hayo in Wefdiga Madaxweynaha y iman doona Boosaaso & Inkale.
Madaxweynaha & Wefdigiisa inta ay joogaan Qardho waxay Kulan la qaadan doonan Masuuliyiinta Deegaankaas iyaga oo kawada Hadli doona Xaaladaha Amaan & Xaalada Guud ee Gobolka.
Habeenkii xalay waxaa Magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka Karkaar Gaaray Wasiiro ka tirsan Maamulka Puntland oo halkaasi u tagay inay wefdiga Madaxweynaha halkaasi ku soo dhaweeyaan.
Wixii ku soo kordha Safarka Madaxweynaha Puntland kala soco SBC